Damaca Turkiga, Qatar & Itoobiya ee Khayraadka Soomaaliya – Horumar mise Halis? – Great Banaadir
Xukuumada & Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa bilowgii sanadkan 2020 ansixiyey Sharciga Batroolka Soomaaliya, sharcigan oo la dadajiyey ayaa laga hormariyey sharuuc kale oo muhiim ahaa sida Sharciga Doorashooyinka, waxaa isla todobaadkii tagay Xukuumadii la riday ee Federaalka ansixisay dhismaha Hay’ada Batroolka oo daba socda dhameystiran sharcigii Batroolka.
Hadaba dhaq dhaqaaqa Xawliga ku socda balse daahsoon ee ku aadan ka faa’iideysiga Khayiraadka & Batroolka Soomaaliya ayaa ah mid murran xoogan ka taagan yahay sharuucdiisa iyo waliba heshiisyada lala galay dowladaha shisheeye ee dhabarka ka riixaya Xukuumada Nabad iyo Nolol ee hada wakhtigeedii sii dhamaanayo.
Gen.Hulusi Akar, Taliyaha Militariga Turkiga oo ku sugan Saldhiga Muqdisho
Turkida ayaa xiligan olole militari ka wada dalka Liibiya oo ay dowlada Tripoli la galeen heshiis batroolka, arrintaasi oo dab kusii shiday xiisada iyo dagaalada ka socda Liibiya, waxaana arrintan si weyn uga soo horjeeda dowlada France oo hada wada olole Midowga Yurub cadaadis ku saarayo Turkida.
Militariga Turkida ayaa saldhigooda ugu weyn ee Afrika kuleh dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho halkaasi oo lagu tababaro ciidamada Dowlada Federaalka, waxaana kamid ah ciidamada ay Tababraan kuwa loogu yeero Haramcadka oo si toos ah u hoos taga Villa Soomaaliya.
Doha ayaa la rumeysan yahay inay kaalin weyn ka ciyaarto xiriirka weyn ee ka dhaxeeya Villa Soomaaliya iyo Addis Ababa.
Dowlada Qatar ayaa sanadihii lasoo dhaafay xoojisay xiriirka ay la leedahay dalka Itoobiya, sanadkii 2017 labo bilood kadib doorashadii Madaxweyne Farmaajo ayuu Amiirka Qatar safarkiisii ugu horeeyey ku tagay magaalada Addis Ababa.
Abiy Ahmed ayaa dhamaadkii sanadkii tagay 2019 safar muhiim ah ku tagay dalka Qatar, arrimaha ay ka wadahadleen ayaa u badnaa ganacsiga iyo xaalada dalka Soomaaliya.
Waxaase weli murran xoogan ka taagan yahay Sharuucda ay Villa Somaliya marisay Golaha Shacabka ee Batroolka Soomaaliya oo ay kasoo horjeedaan dowlad gobaleedyada xubnaha ka ah Federaalka Soomaaliya, xili aan lagu heshiis saami qeybsiga Federaalka iyo Dowladaha xubnaha ka ah sida uu qeexayo Dastuurka Soomaaliya.
Xasilooni darada siyaasadeed ee xiligan ka jirta dalka Soomaaliya ayaa iyaduna ah mid aan la aqoon halka ay salka dhigan doonto hadii Madaxweyne Farmaajo ku adkeysto xil kororsiga uu sida weyn ugu dadaalayo.
Waxaa hubaal ah in dalka Soomaaliya u baahan yahay inuu ka faa’iideysto Khayraadka illaahay ku maneystay oo wadankan burburay gaarsiin kara Horumar, hase yeeshee Halista weyn ayaa ah in tartankan shisheeyaha ugu jiro khayraadkan uu dalka iyo dadka Soomaaliyeed dhaxalsiin karo colaad iyo dagaalo ka duwan kuwii horey wadanka usoo maray.
Isha Horseed Media
Yaa kala Jaray Soomaaliya iyo Somaliland?
woman arrested after police say she was involved in a drunk driving hit-and-run, had 3 children in car
Madaxweynaha Hirshabeelle Oo Amray In Lasoo Qabto Kooxdii Dishay Wasiir Karaani
Maxay Musharaxiinta Xilka Madaxweynaha Soomaaliya Kala Hadleen Beesha Caalamka?